ဆံနွယ်လေးတွေ ကျန်းမာဖို့ . . . – Good Health Journal
ဆံနွယ်လေးတွေ ကျန်းမာဖို့ . . .
အမျိုးသားတွေရော၊ အမျိုးသမီး တွေရော ဆံကေသာကောင်းတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဆံကေသာ ပုံသွင်းတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ လေမှုတ်စက်၊ ဖြောင့်စက်၊ ကောက်စက်တွေက ဆံကေ သာကို အနည်းနဲ့အများ ပျက်စီးစေပါ တယ်။ ဆံသားကို ဖြောင့်လိုက်၊ ကောက် လိုက်လုပ်တာတွေ၊ အရောင်ဆိုးတာတွေ ကလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဆံကေသာ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းဖို့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ treatment တွေပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်ယံကပဲ ကျန်းမာဖို့လုပ်နေတာတွေ က အထိုက်အလျောက်တော့ ထိရောက် ပေမယ့် ဆံကေသာကျန်းမာစေတဲ့ အ စားအစာတွေပါ စားပေးမယ်ဆိုရင် အ တိုင်းထက်အလွန် သန်စွမ်းတောက်ပြောင် တဲ့ ဆံကေသာအလှကို ရရှိမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ ဆံကေသာအလှ အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ စား စရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်စစ်က သင်ရဲ့ အရေပြား၊ ဆံကေသာနဲ့ လက် သည်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အ ရေးကြီးပါတယ်။ နေ့စဉ် အိုမီဂါသရီး ဖက်တီးအက်စစ်ပါဝင်တဲ့ စားစရာတွေ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အိုမီဂါသရီးဖက်တီး အက်စစ်က ဆယ်လ်မွန်၊ တူနာငါး၊ မက် ကရယ်ငါး၊ သစ်ကြားသီးစေ့၊ ဗာဒံသီးစေ့ နဲ့ Flaxseed oil တွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
(၂) ဗီတာမင် ဘီ ၆
ဗီတာမင် ဘီ ၆ က ဦးရေပြားဆီကို အောက်ဆီဂျင် ရောက်ရှိစေပြီး မွေးညင်း ပေါက်တွေကို အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကို နေကြာစေ့၊ ကြက် သား၊ တူနာငါး၊ ငှက်ပျောသီး၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ဟင်းနုနယ်တွေကနေ ရရှိနိုင် ပါတယ်။
(၃) ဗီတာမင် ဘီ ၉
ဗီတာမင် ဘီ ၉ (ဖောလစ်အက် စစ်) က သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဒီအန်အေ ကို ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အခါ အရေးပါပါ တယ်။ ဆဲလ်တွေ အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျန်းမာတဲ့ဆံကေသာကို ရစေပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်ကိုရဖို့ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ၊ အချဉ် ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲ အမျိုးမျိုး၊ ပဲနီကလေးတွေကနေ ရနိုင် ပါတယ်။
(၄) ဗီတာမင် ဘီ ၁၂
ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းမွန်စေတာ ကြောင့် ဆံကေသာကို သန်စွမ်းစေ ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ ကို ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ငါး၊ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘိုင်အိုတင်က ဖက်တီးအက်စစ် ထုတ်လုပ်မှုကို ကူညီပေးနိုင်တာကြောင့် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးကို အထောက်အ ကူ ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘိုင်အိုတင် ချို့တဲ့ရင် အရေပြားခြောက်တာ၊ အဖတ်တွေကွာ တာ၊ ဆံသားကြွပ်ဆတ်တာတွေ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဆံသားသန်စွမ်းဖို့ အားပေးတဲ့ ကီရာတင်ကိုလည်း ကူညီပေးပါတယ်။ ဘိုင်အိုတင်ပါတဲ့ စားစရာတွေကတော့ အစေ့အဆန်တွေ၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ဆယ်လ် မွန်၊ ဆာဒင်းငါး၊ နွားနို့၊ ချိစ်၊ ထောပတ်သီး၊ ရက်စ်ဘယ်ရီသီး၊ ပဲသီးတောင့်၊ ပဲပိစပ် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့နေပြီဆိုရင် ဆံပင်တွေ အကျွတ်များလာပြီး အရောင် မွဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇင့် ကို ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ချိစ်၊ ပင်လယ်စာ၊ အစေ့အဆန်၊ ပဲသီးတောင့်၊ နေကြာစေ့၊ ဖရုံစေ့ စတာ တွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့တာက ဆံ ခြည်မျှင် အသစ်ဖြစ်ပေါ်တာ၊ ဆံပင် ကျွတ်တာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ သု တေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ဆံသား ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ပေါ်ဖို့ ဦးရေပြားပေါ်က မွေးညင်းပေါက်တွေက မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုရဖို့ ငှက် ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး၊ သဖန်းသီး၊ ဟင်းနုနယ်၊ အနက်ရောင်ချောကလက်၊ ဗာဒံသီးစေ့၊ ဖရုံစေ့၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ နံနံပင်၊ ဆောလ်မွန်ငါး၊ ဒိန်ချဉ်တို့ကို စားပေးပါ။
Categories:	Beauty	/ No Responses / by Good Health Journal October 8, 2018